COURT TRAITE DE DEVELOPPEMENT – Blaogin'i Voniary
COURT TRAITE DE DEVELOPPEMENT
Eric Thosun MANDRARA – 2003
“Nous évoluons dominés au sein des grands systèmes économico-financiers à vastes extensions internationales… Les décisions aux centres de ces systèmes dictent notre avenir infiniment plus que toutes les actions que nous pouvons mener localement…” P.29
Famintinana: Ny fampianarana azontsika dia mampisandrahaka hevitra. Be loatra ny fahalalana atsofoka ao an-dohantsika, hany ka lasa tsy fantantsika izay tena marina sy izay tena zava-misy. Miankina amin’io anefa ny fampandrosoana ny firenena iray satria raha misavoritaka isika dia tsy afaka miara-mandroso. Ilaina ary ny fandaminana ny fahalalana araka ny nambaran’i HEGEL mba tsy ho sodokan’izay saritsarim-pahalalana etsy sy eroa.
Raha zohina ny zava-misy tena misongadina amin’ny firenena andàlam-pandrosoana toa an’i Madagasikara dia ny fanjanahann’ny rafitra avy any ivelany sy ny fisavorovoroan-kevitra. Ny mampahazo vahana io fanjanahana io dia ny fiankinan-dohantsika amin’ny fanjifana vokatra avy any ivelany. Eo koa ny fisian’ireo antokon’olona mahazo tombon-tsoa ka tsy te-hiala amin’izany. Fa tsipihina indrindra koa ny fanindrahindrantika izay hevitra sy fampianarana avy any ivelany. Anisan’izany ny maha-voagadra antsika ao anatin’ny foto-kevitr’i Adam SMITH mifikitra amin’ny fampiasana renivola.
Ny olana mavesa-danja indrindra anefa dia ny fampietsehana ny toekarena ara-barotra. Ady hevitra efa nisy hatrany am-piandohana teo amin’ireo raiben’ny ekonomia ny valin’izany: na “monnaie” na “capital”. Izany safidy lehibe izany koa no mipetraka eo amin’ny mpitondra firenena. Ny fampiasana ny “capitalisme” anefa dia voaporofo fa amin’ny mpandraraha ihany no mahomby fa tsy amin’ny firenena. Io foto-kevitra “classique” izay nipasohana ny atidohantsika io dia fanafenana ny tena paika mitondra amin’ny fandrosoana.
Raha dinihina ireo firenea matanjaka toa an’i Angleterre, Japon, France ary Russie dia làlana iray no narahan’izy ireo. Tsy inona izany fa ny fandraisan’ny fitondrana an-tànana ny fiainam-pirenena, ny famoronam-bola ary ny fametrahana rafitra manodidina izany. Ao anatin’ny fanitaran’izy ireo ny fahefany ny fanjanahan-tany. Ampidiriny ao anaty rafitra naoriny ny firenena hafa ary ataony miankin-doha aminy. Toy izany no miantraika amin’ny tanindrazantsika izay eo ambany fifehezan’i France sy ny fanandevozan-trosan’ny rafitr’i Bretton Woods.
Inona ary no tokony atao manoloana izany? Ny làlana nampanankarena ireo firenena lehibe ireo, ny “mercantilisme” izany, no tokony arahina. Mamorona rafitra no mety ary manentana ny olona hampiasa vola amin’ny fomba samihafa. Noho izany, tokony handray an-tànana ny fiandrianam-pirenena ny mpitondra. Izany dia miainga amin’ny fialana amin’ny ziogan’ny vazaha, famoronana vola, fananganana tafika matanjaka, fitrandrahana tsena any ivelany ary fifehezana ny harena an-kibon’ny tany.
Ny fahavononana avy amin’ny tsirairay, indrindra ny mpitondra no afahantsika miala amin’ny fanjanahana ara-tsaina, ara-toekarena ary ara-politika. Ny tena fampandrosoana manko dia mianga avy amin’ny Malagasy ihany.
Toerana ahitana azy : Librairie Mixte – Victoria Plaza
“Quelles ambitions avons-nous pour notre société, pour notre génération, pour nous-mêmes?” P 201
économiste malagasy, fampandrosoana, Fanagasiana, fandrosoana, Mandrara, Politique économique Malagasy
FACEBOOK TENY GASY
Un commentaire sur “COURT TRAITE DE DEVELOPPEMENT”
Ping: Court traité de développement - Le livre que tout intellectuel Malagasy devrait lire - Book News Madagascar